Meydadka muhaajiriin Itoobiyaan ah oo laga helay Mozambique - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Meydadka muhaajiriin Itoobiyaan ah oo laga helay Mozambique
Meydadka muhaajiriin Itoobiyaan ah oo laga helay Mozambique
In ka badan 60 qof oo la tuhunsan yahay inay yihiin muhaajiriin aan sharci wadin oo ka yimid dalka Itoobiya ayaa meydadkooda maanta laga helay konteenar baabuur xamuul, gobolka Tete ee waqooyiga galbeed ee dalka Mozambique, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Isbital ku yaalla halkaas.
“Baabuur xamuul ah oo safrinayey muhaajiriin la tuhunsan yahay inay yihiin Itoobiyaan, kana yimid dalka Malawi, ayaa lagu joojiyey buundada lagu cabiro culeyska rarka baabuurta ee Mussacana, waxaana laga helay meydadka 64 qof. Kaliya 14 ayaa ka bad-baaday,” ayuu yiri sarkaalka oo la hadlay wakaaladda wararka AFP, balse codsaday inaan la magacaabin.
“Sababta dhimashada dadkan ayaa loo malaynayaa inay tahay neefta oo ku xirantay,” ayuu yiri.
Dhibanayaasha ayaa waxay ku jiraan konteenaro buluug ah oo uu jiidayey baabuur xamuul ah, sida ka muuqata sawirro ay heshay AFP.
Mozambique ayaa inta badan loo arkaa xarunta dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay galaan dalka Koonfur Afrika.
Koonfur Arika, oo ah dalka ugu dhaqaalaha wanaagsan qaaradda, ayaa waxaa usoo haajira dadka saboolka ah ee dalalka deriska ah sida Lesotho iyo Zimbabwe, iyo sidoo kale kuwa ka imanaya dalal fog, sida Ethiopia oo kale.
Previous articleDowladda oo Gubtey Jaad si qarsoodi ah loo keenay Muqdisho
Next articleCiyaaryahan hore ee xulka Qaranka Somalia oo u geeriyoodey Coronavirus
Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka Walanweyn
Ku dhawaad 600 oo ruux oo New York Corona Virus ugu geeriyootay 24 kii saac ee lasoo dhaafay
Madasha Xisbiyada oo Midowga Yurub kala hadlay Qabsoomidda doorasho xor
DHAGEYSO: Warka Habeen 5-4-2020
Taabit Cabdi oo si kulul uga hadley Kufsi loo geystey laba Gabdhood
Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan oo sheegay in la soo weeraray
DEGSO APP-KA RADIO RISAALA
Install Risaala FM App on Android
Bishaaro: Hadda kasoo degso Google Play Radio Risaala App si too ahna ula soco barnaamijyada iyo wararka Raadiyaha.ANNOUNCEMENT: Install Risaala FM App on Android. Now, you can enjoy your favorite shows anytime, anywhere, at no cost
Posted by Risaala Media Corporation on Tuesday, 5 April 2016
DHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 05-04-2020
DHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 05-04-2020
DHAGEYSO: Warka Habeen 4-4-2020
DAAWO:Ma Dhaqan galey Amarkii lagu xirayey Goobaha lagu Caweeyo ee liido?
DAAWO:-Muqayiliinta Muqdisho Maxay ku badasheen Qaadkii la joojiyey?(Warbixin)
DAAWO:-Cabdifitaax Cabdi Xaaji oo maqalka Naafo ka ah Shaqo adagna haaya (Warbixin)
DAAWO:- Muxuu noqon karaa Mustaqbalka hoggaanka Ahlusunna?
Xoghayaha Ururka SOMA ” Waa sax 100% Warbixinta ay soo saartay Hay’adda Amnesty”
Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in si deg deg ah loo...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay Madaxda Dowlad-gobeeldka Koonfur Galbeed, Odeyaasha Dhaqanka iyo waxgaradka deegaannada in ay u istaagaan...